CNC တွင်ခုံလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်ကရိယာအမှားအယွင်းများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ CNC ခုံ၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်းကရိယာအမှားအယွင်းများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ဦးချင်းစီကရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိကျစွာတပ်ဆင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုမြင့်မားသည်မဟုတ်, မြင့်သောမဟုတ်ပါ, နှင့်အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းကရိယာ၏ wear သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ကြုံတွေ့နေရသည်။ ကရိယာ erro ...ဆက်ဖတ်ရန် »
1.1 Overtravel ယင်းအစာကျွေးခြင်းရွေ့လျားမှုဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ကန့်သတ် switch ကိုဆုံးဖြတ်ဟာ့ဒ်ဝဲန့်သတ်ချက်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားဆော့ဖ်ဝဲန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သည့်အခါတစ်ဦး overtravel နှိုးဆော်သံပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်, နှင့်နှိုးဆော်သံအကြောင်းအရာ CRT အပေါ်ပြသပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ CNC system ကိုကို manual အရ, အမှားဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရုတ်သိမ်းပေးရန် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
CNC စက်စင်တာ servo စနစ်ဘုံအမှား
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည့်အတိုင်း CNC စက်စင်တာ servo စနစ်ဘုံအမှား, အစက်စင်တာ servo စနစ်ကစက်ကိရိယာတခုအခွင့်တန်ခိုးကိုပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ servo စနစ်ကစက်စင်တာမရှိပဲ, workpiece လုပ်ငန်းများ၌မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် servo စနစ်စက် ce အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဆိုပါ CNC စက်အလယ်ဗဟိုတွင်သံအစိတ်အပိုင်းများများ၏စက်အကောင်းသို့မဟုတ်ခက်လား?
ပထမဦးစွာ CNC စက်စင်တာများအတွက်သံအစိတ်အပိုင်းများများ၏စက်ခက်ခဲသံလမ်းသို့မဟုတ်သံလမ်းအဘို့ကောငျးကြိုးအတှကျကောငျးတယျ။ သံအစိတ်အပိုင်းများကိုအတော်လေးဘုံ workpieces ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစက်စင်တာသံအစိတ်အပိုင်းများကို process ဖို့စက်စင်တာအတွက်အသုံးမလိုလျှင်အတော်များများဖောက်သည်ကိုမေးပါလိမ့်မယ်။ သည် "CNC စက်စင်တာက ...ဆက်ဖတ်ရန် »
CNC စက်စင်တာများ၏လေဟာနယ် Chuck ကဘာလဲ?
1. CNC လေဟာနယ် Chuck ကဘာလဲ? လည်းလေဟာနယ်ဖြန်အဖြစ်လူသိများလေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းခွက်သည်, လေဟာနယ် actuators ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆောင်းပါးများဖမ်းပြီးမှလေဟာနယ် Chuck ၏အသုံးပြုမှုကိုဈေးအပေါဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လေဟာနယ် Chuck စတိုင်များအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရော်ဘာကိုဖန်ဆင်းစုတ်ယူခြင်းခွက်နိုင်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »